Gbasara anyị - Yantai Changyou Glass Co., Ltd.
Yantai Changyou Glass Co., Ltd nwere ihe karịrị afọ 16 ahụmahụ na-enye iko karama ngwaahịa na yiri ngwugwu ngwọta. Ngwa ndị bụ isi na-ekpuchi ụdị iko dị iche iche, gụnyere karama iko mmụọ, karama mmanya, karama iko mmanya, karama mmanya, karama mmanụ dị mkpa, karama oliv, karama ịchọ mma, ite nri, karama iko ọgwụ, wdg.
E hiwere osisi anyị na 2003, nke gafere akwụkwọ ISO22000, akwụkwọ UKS, yana akwụkwọ SA8000 na-elekọta mmadụ. Anyị kwadebere maka osisi square nke 75 square na usoro Germany SORG, ọtụtụ iri LS.machines na usoro ọsọ silk na-agba ọsọ dị elu si Europe.
Companylọ ọrụ anyị na-etinye uche nke ukwuu na imepụta ihe na modem iko na-aga n'ihu na usoro nhazi, anyị na Coca Cola, Pepsi-cola, Diageo na ụdị mmanya ndị ọzọ a ma ama. Ọ bụghị nanị na ọkọnọ na anụ ụlọ ahịa, anyị na ngwaahịa na-exported karịa mba 30 n'ụwa nile. Anyị isi ahịa bụ North America, South America, Southeast Asia, Australia, Mid East, Africa, na na.
Ahaziri aghụghọ, OEM na ODM iwu na-ji obi ụtọ na-anabata anyị osisi Low kacha nta iji ibu na-eme ka anyị ọzọ mgbanwe na izute ihe ndị ahịa chọrọ. All ndị a uru na-eme ka anyị a otu nkwụsị nkwakọ soplaya.
Uru nke ngwaahịa anyị bụ ịdị mma siri ike. Ogo bụ ndụ anyị. Ọ bụghị naanị na igwe na - ahụ maka njikwa mma, anyị nwere ndị ọrụ nyocha nke ndị ọrụ 17 ọkachamara. 95% nke ndị otu nwere ihe karịrị 5 afọ ahụmahụ na anyịindustiy. Ọnụ ọgụgụ anyị dum na-echekwa usoro anyị na-echekwa ikike ọkọnọ anyị niile.
Biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị ma ị ga-enwe afọ ojuju maka ngwaahịa anyị na ọrụ ọkachamara anyị.
1. afọ 18 nke ahụmịhe n'ichepụta karama iko.
2. Nye gị nhọrọ ịkwụsi ike n’ezie, maka na anyị matakwara nke ọma banyere okpu karama, aha ọla, katọn, wdg.
3. Ike ịrụ ọrụ ka mma, nkà na ụzụ nke mbụ na afọ ahụmahụ ga-eme ka anyị na-agbanwe agbanwe n'akụkụ niile karịa ọnọdụ ndị ọzọ.
4. Otu àgwà, ọzọ na-eri-irè. N'iji teknụzụ kachasị elu maka ịmepụta karama dị fechaa, n'okpuru nkwenye nke ijide ogo karama ahụ, na-ebelata ọnụ ahịa, na-eme ka karama anyị nwee asọmpi n'ahịa Na China, enweghị ụlọ ọrụ iko 3 karịrị nke nwere teknụzụ karama dị fechaa. Anyị nọ n'etiti ndị kacha mma.
5. Nkà ihe ọmụma anyị: Ahịa bụ mgbe niile ziri ezi, àgwà na aha ndị ọzọ dị mkpa karịa uru. Ọrụ anyị niile bụ nkwado ogologo oge maka mmeri na ndị ahịa, ọ bụghị naanị mmekọrịta ahịa.
6.Our mgbe-sales ọrụ: The ngafe ọnụego nke anyị na-ruru 99,98%. Anyị ga-anọgide na-emeziwanye ngwaahịa anyị. Ọ bụrụ na enwere nsogbu, anyị agaghị ahọrọ ịgbapụ dị ka ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Kama nke ahụ, anyị ga-ehiwe otu ndị ọkachamara ngwa ngwa o kwere mee iji kwado atụmatụ na ịkwụ ụgwọ maka nsogbu ndị na-ebilite. Anyị ga-aza ajụjụ maka ngwaahịa anyị.